Yenza amaxabiso kunye nokuThelekisa iitshathi njengeNinja | Martech Zone
Yenza amaxabiso kunye nokuThelekisa iitshathi njengeNinja
NgoLwesithathu, Oktobha 23, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Izolo ebusuku ndakhe igridi yamaxabiso kwiplagi entsha esazisa ngayo I-WordPress kwiqonga lokuthengisa nge-imeyile, Isetyhula. Kwakungekho mnandi kwaphela ukwakha (bendisebenzisa Amaxabiso asimahla e-DreamCode kunye negridi yokuthelekisa iisampulu) kwaye kusafuneka ziguqulwe ngakumbi ukuqinisekisa ukuba ziyaphendula kwizikrini nakwiselfowuni.
Ukuba ujonga indlela elula ngakumbi yokwakha iitafile zokuthelekisa kunye neegridi zamaxabiso, jonga Thelekisa iNinja kwaye Ixabiso leNinja. Yomibini le minikelo iza neetemplate ezithile ezisemgangathweni eziza kukunceda ukhuphe ukwakha iigridi ezintle ngemizuzu.
Le yinkonzo eyenziweyo, ngenxa yoko awuyenzi igridi kwaye ukope / uncamathisele ikhowudi yakho. Usebenzisa ikhowudi snippet oyincamathisela kwi-HTML yakho (okanye i-ID yetafile efakwe kwi Ikhowudi emfutshane yeWordPress ngePlagi) ukubonisa igridi yakho kwindawo oya kuyo.
Izibonelelo ze Thelekisa iNinja kwaye Ixabiso leNinja sisantya onokuthi ukhuphe iigridi ezintle. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kukho ukusikelwa umda kwinto onokuyisebenzisa kwisitayile somsebenzisi. Ekugqibeleni, andikhange ndiyisebenzise le nkonzo kuba bendifuna ukulandela iphalethi yombala ehambelana nesiza. Ewe kunjalo, ukuba isantya kunye nozinzo zibalulekile, kuxhomekeke kwindawo yesithathu ukubonisa umxholo wakho kunokuba okanye kungabi yinto onqwenela ukuyenza.
tags: thelekisa ninjaIgridi yokuthelekisaitheyibhile yokuthelekisaIxabiso le-ninjaIgridi yamaxabisoitafile yamaxabiso
Awudingi isiGanga seShishini ukuze ukuqonde oku